माओवादीले सरकार छोडेको भए चुनाव भाँडिनसक्थ्यो: केपी अाेली – Everest Dainik – News from Nepal
एमालेले १० बर्षे 'जनयुद्ध'लाई स्वीकार गरेको हो ?
उनले नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ? भन्ने प्रश्न गर्दै, उनकै शब्दमा, कुतर्कहरुका पछाडि आफु नकुद्ने पनि बताए। अध्यक्ष ओलीसंग बिबिसिका संवाददाता उमाकान्त खनालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
नेपाली कांग्रेसको हतासा जुन छ अहिले त्यो अराजनीतिक हो। नेपाली कांग्रेसले साम्यवाद भनेको के बुझेको छ ? कुतर्कहरुका पछाडि हामीलाई कुद्नु छैन। ‘साम्य’ भनेको बराबर अनि ‘वाद’। समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा, समान सम्मानको अवस्था समाजमा हुनुपर्छ। सबैको उन्नति, प्रगति हुनुपर्छ। यो भन्दा नराम्रो प्रणाली भयो? साम्यवादी प्रणाली अथवा कम्युनिष्ट अन्तर्गतको व्यवस्थामा चीनले गरेको उन्नति, प्रगति र त्यहाँका जनताको जीवनस्तरका बारेमा के भन्छ कांग्रेस?
ट्याग्स: kp sharma oli, Left Unty